Nhau - Ndeipi tarisiro yeiyo ichangokwira PVC pasi yepurasitiki?
PVC yepurasitiki yepasi nekuda kwekushandisa kwayo kwezvinhu zvine hunyanzvi inowedzerwazve PVC, zvinoenderana neanhasi mamiriro ezvakatipoteredza, inogona kunzi indasitiri yekubuda kwezuva. Tichitarisira kumberi, PVC epurasitiki pasi ichave yakafara nzvimbo yekuvandudza. PVC yepurasitiki yepasi ichave zvakare iri diki uye yakanaka vanhu vanoshandisa inoshanda pasi kune yepasi pasi, munyori anotevera muchidimbu kutaura nezve PVC epurasitiki yepasi indasitiri mune ramangwana rekuChina musika wekuvandudza maitiro.
01 kumhanya kwekuvandudza kwakakurumidza
China yepasi pevashandi uye mbishi zvinhu zvakaisa hwaro hwakasimba hwemabhizinesi epamba kuburitsa PVC mapurasitiki epurasitiki. Musika wakakura uye kukura nekukurumidza kwekudiwa kunokwezva emabhizinesi mazhinji ekupinda muPurasitiki yepurasitiki indasitiri. Zvinotarisirwa kuti mumakore mashoma anotevera, huwandu hwekukura kwePVC yepurasitiki yekugadzira uye yekutengesa ichapfuura iyo yechero zvimwe zvigadzirwa, uye yova imwe yeanokurumidza kukura hunhu hupfumi.
02 yakafara nzvimbo yekushandisa
Pamusoro penzvimbo dzeruzhinji, pasi repurasitiki rePVC rakareruka, murazvo unodzora, hunyoro-humbowo, anti-skid uye mamwe maitiro, zvichiita kuti ive yakakurumbira zvigadzirwa zvekushongedza mune ramangwana. Pamusoro pekushandiswa zvakanyanya munzvimbo dzeruzhinji, ichapindawo mumusika wekushongedza mumba munzvimbo huru, uye chiyero chekushandisa chichawedzerwa.
03 zvakanyanya kuchengetedzwa kwenzvimbo uye hutano
Nekuenderera mberi kwekugadzirisa uye kugadzirisa tekinoroji uye kugadzira tekinoroji, PVC yepurasitiki pasi ichave yakanyanya kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye hutano, chengetedzo ichavandudzwa uye kuvandudzwa, zviwanikwa zvekushandisa mashandiro zvichave zvakakwirira, uye PVC pasi yepurasitiki ichave inonyanya kufarirwa kudzokorodza mhando yepamusoro zvekushongedza zvinhu.
04 yekumisikidza tekinoroji zvinodiwa zviri kumusoro uye kumusoro
Izvo zvisingagumi zvinodiwa zvekuchengetedzwa kwezvinhu zvekushongedza uye kutsvaga kwekushongedza maitiro kuchachinja zvakanyanya iyo yakapusa yekumisikidza maitiro eiyo aripo PVC epurasitiki pasi. Kuti uratidze zvirinani kushongedzwa kwemavara kwePVC epurasitiki pasi, hunyanzvi hwekambani yekumisikidza uye yekuisa vashandi ichave iri yepamusoro uye yepamusoro, izvo zvinokurudzira tekinoroji yekuvaka yePVC yepurasitiki yepasi zvakanyanya kukura uye iyo indasitiri yakaenzana.
05 maindasitiri kupatsanurwa kwevashandi kuri kuwedzera uye kuri pachena
Zvakafanana neyakaitika nzira yekuvhurika kwePVP epurasitiki yepurasitiki mumakore achangopfuura, marikisi akaunzwa kunze ane akaenzana uye akarongeka ekutengesa uye yekumisikidza system, uye kwavo kwakasiyana chikamu chevashandi chiri pachena. Iyo mbishi yezvinhu vatengesi vanoziva kwazvo izvo zvinhu uye mashandiro, saka ivo ndivo vakanyanya kuronga varongi, uye vava chimwe chezvinhu zvakakosha zvehunhu hwePVC epurasitiki yepurasitiki indasitiri. Mumakore mashoma anotevera, epamba epurasitiki epurasitiki yekugadzira mabhizinesi achave akafanana. Ivo havazove ivo chete vanotengesa yePVC epurasitiki pasi, asi zvakare akanakisa ekuvaka mutsigiri wePVC epurasitiki pasi.
06 maindasitiri kusangana kwakasimbiswa
Kunyangwe PVC yepurasitiki yepurasitiki isina kugadzirwa kwenguva yakareba muChina, hunhu hwayo hwedunhu hwakajeka uye indasitiri yacho yakanyanya kusimba. Mabhizinesi akati wandei akaumbwa muHebei, Beijing, Jiangsu, Shanghai uye Guangzhou. Nekuenderera mberi kwekuwedzera kwesimba rekugadzira emabhizimusi emabhizimusi epamba, maficha emaindasitiri anozosimbiswazve, uye hutongi huchawedzera kusimba, nekusimudzira kubatana pamwe nekubatana pakati pemaindasitiri.
Uriri, PVC Sponge Floor, Pasi Carpet Roll, Pet Anonzwa Kutsigira Flooring, PVC Carpet, Pet Chipanji Siporiri,